यी महिनामा जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् धनवान र बुद्धिमान, तपाई पनि पर्नुभयो की ? - Alert Khabar
Homeमनोरञ्जनयी महिनामा जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् धनवान र बुद्धिमान, तपाई पनि पर्नुभयो की ?
१) बैशाख महिनाः बैशाख महिनामा उत्पन्न हुने मानिस भोगी (सर्व सुखयुक्त), धनवान, राम्रो चित्त र बिचार भएका, क्रोधवान, सुन्दर आँखा भएका, रुपवान, स्त्रीहरुलाई माया गर्ने स्वभावका हुन्छन्।
४) साउनः साउन महिनामा जन्मिएका मानिसहरु सुख, दुःख तथा हानी-लाभमा सधैँ एकनास हुन्छन्।
५) भदौः भदौ महिनामा जन्मिने मानिसहरु सधैँ खुसी रहने, धेरै बोल्ने, मधुर बोली भएको र सुन्दर व्यक्ति हुने गर्दछन्।